Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Taabit oo soo gaaray Muqdisho | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Taabit oo soo gaaray Muqdisho
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Taabit oo soo gaaray Muqdisho
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir iyo Duqii hore ee Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa saaka oo Sabti ah soo gaaray magaalada Muqdisho, kaddib dhowr bilood oo uu ka maqnaa.
Taabit Cabdi ayaa imaatinkiisa Muqdisho ku soo aaday, iyadoo maalinta berri ku beegan tahay 14 October sanad-guuradii koowaad ee ka soo wareegatay qaraxii 14 October ee Isgoyska Zoobe, kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 500 oo ruux.
Guddoomiye Taabit ayaa lagu xusuustaa kaalintiisa gurmadka aheyd ee uu ka qaatay musiibadaas iyo xusuusta gaar ahaaneed ee ku reebtay qaraxii isgoyska Zoobe, isagoo calaamad gaduudan oo ka turjumeysay baroor diiq iyo xusuusta weerarkaas ku xirtay gacanta Bidix
Taabit ayaa la filayaa inuu maalinta berri furo maradii gaduudneyd ee baroor-diiqda aheyd, waxaana maradaas uu astaan uga dhigay afar cinwaan oo kala ahaa, Musiibo Qaran, Gurmad Qaran, Midnimo Qaran iyo Xusuus Qaran.
Bishii Janaayo ee sanadkan ayay aheyd markii xilka looga qaaday khilaaf isaga iyo Madaxda sare u dhaxeeyay, saddex bilood kaddib qaraxii Zoobe, waxaana tan iyo markii xilka laga qaaday uu ahaa nin aan dhigan calaamadii gaduudneyd, isagoo xusuus gaar ah u muujiyay musiibadii qaraxii 14 October.
Previous articleSoomaaliya oo ka mid noqotay Golaha Xuquuqul Insaanka QM (Doorasho ka dhacday New York)
Next articleWafdi ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Qatar oo Muqdisho yimid